Nnọọ Ozi Mmuta site na ndị ọkachamara Email | Martech Zone
Ozi Nnabata Ozi sitere na Ndị ọkachamara Email
Wenezdee, Jenụwarị 2, 2019 Wenezdee, Jenụwarị 2, 2019 KC Karnes
Ozi nnabata ga-adị na mbụ dị ka ọtụtụ ihe dị ka ọtụtụ ndị ahịa ga-eche ozugbo onye ahịa debanyere aha, emeela omume ahụ ma gosipụta ọrụ ha. Dịka ndị ahịa, ọ bụ ọrụ anyị iduzi ndị ọrụ site na dum ahụmahụ na ụlọ ọrụ ahụ, na ebumnuche nke ịkwalitewanye na-eto eto ahịa ndụ uru.
Otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ahụmịhe onye ọrụ bụ echiche mbụ. Mmetụta mbụ a nwere ike ịtọ atụmanya ma ọ bụrụ na obi erughị ya ala, ndị ahịa nwere ike ikpebi ịkwụsị njem ha ozugbo ahụ.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị ekwenye na mkpa ịnọ n'ụgbọ nwere ike ịdị. Gaghị akụziri ndị ọrụ ọtụtụ ebe ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịba uru nwere ike ịkọwa ọdachi maka ọdịnihu ụlọ ọrụ ahụ. Ozi nnabata nwere ike ịbụ ngaji ọla ọcha iji nye ndị ahịa nri ozi a dị oke mkpa.
Yabụ, kedu ihe bụ akụkụ nke mkpọsa ozi nnabata nke ọma? Site n'ịmụ ụlọ ọrụ ndị na-aga nke ọma na ndị ọrụ na ọkwa ha na mkpọsa ozi nnabata ha, enwere isiokwu ụfọdụ:
Ziga site na adreesị ozi-e mmadụ.
Hazie akara isiokwu na aha onye nnabata.
Depụta ihe ndị ahịa nwere ike ịtụ anya ọzọ.
Nye ọdịnaya na akụrụngwa n'efu yana ego.
Na-akwalite ahịa Ntuziaka.
Mmejuputa atumatu ndi a n'ime ozi nnabata email gi nwere ike inye aka mee ka onu ogugu na ntinye aka. Nchọpụta nkeonwe na ozi ịntanetị naanị achọpụtala na ịbawanye ọnụego emeghe site 26%.
Omume ọzọ na-adọrọ mmasị na email bụ ịnye eserese eserese n'ime ihe ngosi iji dọta anya ngwa ngwa ma mee ya. GIF, dịka ọmụmaatụ, na-enye naanị okpokolo agba ole na-eme ka faịlụ ahụ pere mpe ma na-enye ohere maka ozi ịntanetị HTML iji jigide ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ.
Ntughari uzo abiala ihe ozo di iche n'ime ozi nnabata iji kwalite azụmahịa site n'okwu onu. Mgbe onye ahịa kesara akara ma ọ bụ zụta na enyi ha n'oge na-adịbeghị anya ọ nwere ike bụrụ ụzọ ntụgharị kachasị ike, nke mere na email izizi bụ oge dị ukwuu iji kụọ mkpụrụ a. Otu n'ime usoro kachasị mma iji kwalite ahịa azụmaahịa ịga nke ọma bụ ịnye onyinye ihu abụọ. Nke a na-enye ma ndị ahịa na-ekere òkè na onye natara ha ihe mkpali ime na ntinye aka.
Iji usoro dị ka ndị a na ndị ọzọ maka gị email nnabata ozi mkpọsa nwere ike inye aka kwalite onye ọrụ ahụike dị mma na ahụmịhe ndị ahịa dị mma. Jiri anya dị n'okpuru site na CleverTap duzie usoro ozi nnabata gị.
Tags: email nkeonweozi Atụmatụịnabata ozi emailonboarding oziahịa ahịaozi natara
KC Karnes bụ onye ahịa ahịa azụmaahịa a maara nke ọma na onye ọchụnta ego nwere ọrụ maka ịkọ ụfọdụ ụlọ ọrụ teknụzụ kacha ewu ewu na Silicon Valley, gụnyere CleverTap, ndị ọgụgụ isi Ekwentị Nkwado Ahịa.
Azụmaahịa Omnic Na-ewepụta Ndị Ọzọ Na-eguzosi Ike n'Ihe na Ndị Bara Uru
Ọhụrụ Martech Zone Akara maka 2019